Tag: isi ihe | Martech Zone
Tag: isi ihe
Chọta Center nke ndọda maka Nnukwu Ngosipụta Ngosipụta
Onye ọ bụla maara na PowerPoint bụ asụsụ azụmahịa. Nsogbu bụ, ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri PowerPoint abụghị naanị ihe nkiri slide dị egwu na nke na-agbagwoju anya na-eso ndị na-eme ihe ngosi na-ewebata ụra. Ebe anyị mepụtara ọtụtụ puku nkwupụta, anyị achọpụtala omume kacha mma dị mfe, mana anaghị arụ ọrụ. Iji mezuo nke ahụ, anyị mepụtara Center of Gravity, usoro ọhụụ maka ngosipụta ụlọ. Echiche bụ na oche ọ bụla, slide ọ bụla, na ọdịnaya ọ bụla
Nke a bụ ọkwa m kwesịrị ide ihe karịrị otu afọ gara aga, mana a kpaliri m ide ya n'abalị a mgbe ihe omume m kwuru na ya. N'afọ gara aga, agara m Rapid City, South Dakota wee kwuo okwu na Concept ONE, ihe omume azụmaahịa azụmaahịa mbụ nke Korena Keys, onye ọchụnta ego mpaghara, onye nwe ụlọ ọrụ, na South Dakotan dị mpako. Ebumnuche Korena bụ ịkpọbata ndị ọkà okwu si na steeti nwere ike
Vidio: Kevin Spacey na-ekwu maka ihe atọ gbasara akụkọ akụkọ
Akụkọ akụkọ bụ ọnụma niile ugbu a na azụmaahịa ọdịnaya ọdịnaya. Ọ bụkwa isiokwu mkparịta ụka na Ahịa Ahịa World 2014 ebe Kevin Spacey mere isi okwu… na ịkọ akụkọ. Maazị Spacey jere ije n'okporo ụzọ atọ nke nnukwu akụkọ. Agbakwunyere m okwu m ebe a - ị nwere ike ịlele vidiyo nke isi okwu ya (nke edeziri nke ọma iji bepụ ọtụtụ mkpokọta). Esemokwu - Azụmaahịa gị nwere ike ọ gaghị
Nchịkọta Gị Na-efu Ahụ
Satọdee, Nọvemba 6, 2010 Thursday, January 16, 2020 Douglas Karr
Na Fraide, ekwuru m okwu na eduDEV, ogbako nke ndi nkuzi Mahadum na ngalaba ahia, ihe banyere Analytics. Ọtụtụ n'ime ndị na-ege ntị na-eji Google Analytics, ya mere, ngosi gbanwere maka ya. Kama ịme ngosi ọzọ na-agwụ ike na Google Analytics, achọrọ m inye ndị na-ege ntị mmetụta nke ihe ngwa nyocha ha na-efu na ihe ngwaọrụ ndị ọzọ dị ebe ahụ iji mejupụta oghere ndị ahụ. Ngwaọrụ ndị m mere ka a kpọtụrụ aha
Igodo ise maka ihe ịga nke ọma nke onwe gị
Wenezdee, Jenụwarị 13, 2010 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M nwere a mkparịta ụka na otu enyi taa na nwetara email site na ọzọ na-arịọ m ndụmọdụ na otú e si ewu ha onwe onye ika… na-emecha uru ya. Nke a nwere ike ịbụ isiokwu nke enyi Dan Schawbel zara, ọkachamara ọkachamara na-ahụ maka onwe… yabụ lelee blog ya anya. Aga m ekekọrịta echiche m banyere ihe m mere n’ime afọ iri gara aga, agbanyeghị. Wepụta onwe gị otu ịchọrọ ka a ghọta gị - M
2.0 Web maka Ngosipụta Azụmaahịa
Monday, March 17, 2008 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Naanị m chọrọ ịkekọrịta ihe ngosi m mere na Sharp Minds. Anyị nwere ụfọdụ nnukwu ụlọ ọrụ mpaghara ndị na-achọ ịmụ ka ha ga-esi tinye blọọgụ na soshal midia na mbọ ha ịkwalite azụmahịa ha. Ọ bụghị ọtụtụ ebe a na ngosi - ọtụtụ n'ime ya bụ m na-ekwu okwu, yana ịtụghachite azụ na saịtị na ngosi. Ọ bụ isiokwu ọhụrụ Powerpoint / Keynote nke m mere, agbanyeghị!